Chickpeas sauteed nemiriwo | Kicheni Mapepa
Chickpeas sautéed nemuto we mhiripiri
Mhoroi vasikana! Nhasi ndinokuunzira nzira ine hutano yekudya zvimwe zvakanaka sauteed chickpeas. Isu tinogara tichirondedzera izwi rekuti chickpea kuti riite sezvo richikufuta. Zvakanaka, bvisa pfungwa iyi kubva mumusoro mako, nekuti kune akawanda mapiro ane mapapiro ane chickpeas: chickpea salads, nhokwe dzakasungwa nemiriwo, masobho, purees, nezvimwe.
El chickpea, kuva nyemba tinofanira kuzviisa mukati kudya kwedu. Asi hazvikodzere chikafu pachacho, asi izvo zvatinoisa pairi. Iyi mhanga inotipa fiber, mapuroteni uye zvinovaka muviri uye chete mashoma muzana emafuta. Naizvozvo, zvinokurudzirwa mukudya kwakanaka kwekubatira uye zvakare mune zvine hutano kudya kwemoyo.
Kune vanhu vaviri:
500 g yenyuchi.
1 huru tsvuku bhero mhiripiri.
1 hombe bhero bhero mhiripiri.
1 wepakati anyanisi.
5 mavhavha egariki
Zvimedu zvishoma zvechingwa chekare.
1 tablespoon inotapira mhiripiri.
1/2 piritsi yemuriwo avecrem.
Kudonha kwetomatisi yakakangwa.
Usati watanga kugadzirira kamukira yeaya sauteed chickpeasTichanyorovesa nyemba husiku hwapfuura, kuti iite kuti basa rekubika rirambe rakaomarara. Mushure mehusiku ihwohwo, tichabvisa nyemba dziri kutenderera kana dzinoonekwa zvakaipa. Tevere, isu tichavasuma mune yekumanikidza yekubheka yakavharwa nemvura, uye isu tichaenda nayo kumoto kwe45 min-1h.
Panguva imwechete iyo nhokwe dziri kubika, isu tiri kugadzira iyo sofrito. Kuti tiite izvi, tinofanirwa kucheka hanyanisi, mhiripiri uye mahavha maviri egariki muzvikwere zvidiki. Zviise mupani ine kumashure kwakanaka kwemafuta emuorivhi, uye fry iyo kusvikira tazoona kuti zvese zvaitwa zvakanaka. Kana izvi zvikaitika, tinowedzera nhokwe.
Kune rimwe divi, mune imwe pani, fry iwo matatu akasara garlic clove uye iyo diced stale chingwa. Kana ivo vari egoridhe, tinoiwedzera kune inosanganisa girazi kana dhaka. Zvino, kune iwo iwo mafuta iwoyo tinowedzera chipunu chepepuru inotapira uye sadza iyo kwemaminetsi mashoma (iwe unofanirwa kungwarira nhanho iyi, sezvo iyo paprika inogona kupisa), uyezve woiwedzera kune inosanganisa girazi kana dhaka, uye tinoita mhando zvakanaka, iyo, yatinowedzera kune iyo yekutsvaira pani pamwe nehukupeas.
Iye zvino zvatine zvese zvinongedzo pamwechete, tinowedzera iyo zvinonhuwira: munyu, thyme, mhiripiri uye hafu piritsi yevecrem. Isu tinowedzerawo zvishoma yeiyo chickpea muto uye yakanaka jeti yetamato yakabikwa. Taizoirega ichibika ingangoita gumi nemashanu uye ndizvozvo! Ndinovimba unofara nazvo.
Mamwe mashoko - Nzombe yemombe ine chickpea puree
Kudya, Mapepa ane hutano
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Special Recipes » Kudya » Chickpeas sautéed nemuto we mhiripiri
Homemade custard, inotapira kwazvo uye yakapusa kugadzira